Ufuna isinxephezelo eHhovisi likaNdunankulu eMpumalanga - Bayede News
Ufuna isinxephezelo eHhovisi likaNdunankulu eMpumalanga
Sekusele ifake isiphanga ku-European Union iRussia ngeSputnik V
INkantolo Yokwedlulswa Kwamacala yamukele isicelo sokuphonsela inselelo isinqumo senkantolo esithinta uNdunankulu wasesifundazweni iMpumalanga esimayelana nokukhokhelwa kwesinye sezisebenzi izindleko zokulimala sisemsebenzni.
Ecaleni iChurchill v Premier, Mpumalanga (889/2019)  ZASCA 16 mhla zizine kuNdasa wezi-2021, iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala ivune uNks uCatherine Churchill obefuna ukuba kuchithwe isinqumo seNkantolo Enkulu yaseMpumalanga eyaphikisa isicelo sakhe sokuba akhokhelwe amademeshe nguNdunankulu.
UNks uChurchill ufuna ukuba anxeshezelwe nje kusukela esigamekweni esenzeka mhla zinhlanu kuMbasa wezi-2017 lapho okwabe kunombhikisho wamalungu enyunyana yezisebenzi iNational Education, Health and Allied Workers’ Union (NEHAWU) emahhovisi kaNdunankulu wesifundazwe.
Ummangali owayenguMqondisi Omkhulu Kwezenqubomgomo Nezokucwaninga eHhovisi likaNdunankulu, wayesemsebenzini ngosuku lombhikisho.
Lo mbhikisho kwakuhlelwe ukuba wenziwe ngaphandle kwamasango ezakhiwo kepha abanye ababhikishi bakwazi ukungena ngaphakathi nasesakhiweni esasinamaHhovisi kaNdunankulu. Ngalolo suku uNks uChurchill wahlangana nababhikishi izikhawu ezimbili ekuseni ngaphandle kokuthi kube nezigameko.
Okuyikho okwaholela ekutheni ahlaselwe wukuthi wavalelwa ngaphandle kwehhovisi lakhe ngesikhathi yena nezinye izisebenzi sebelungiselela ukuthi baye emakhaya.
Omunye wababikishi waphindisela ngendlela engeyinhle emazwini anokuthuka inhlamba phakathi aphinyiswa uNks uChurchill kwathi emveni kwesikhashana iqembu lababhikishi ababengabalelwa kwabangama-20 bamthola ehhovisi likazakwabo, bamkhipha ngoshova bemthwele ngezandla behla ngezitebhisi baze bayofika lapho ababhikishi babebuthene khona. Lapho washaywa ababhikishi okwathi ekugcineni bamkhiphela ngaphandle kwebhilidi.
UNks uChurchill walimala emzimbeni waphinde waba nengcindezi ngenxa yalesi sigameko okwamphoqa ukuthi awushiye umsebenzi.
Isicelo sokukhokhelwa kwakhe ayesibhekise kuNdunankulu sasincike ebudedengwini ngokwehluleka ukuhlinzeka izisebenzi ngokuvikelwa okufanele.
UNdunankulu wayezivikela ngokuthi ukulimala kukaNks uChurchill ‘kuwukulimala ngengozi emsebenzini’ njengoba lokho kuchazwa kuCompensation for Occupational Injuries and Diseases Act 130 of 1993 (COIDA) nokuthi wayevinjelwe ukufaka isicelo samademeshe yiSigaba 35 seCOIDA.
INkantolo Enkulu yavumelana nalokhu. Umbuzo obalulekile wawuthi ngabe ukulimala kwakhe kuhlangene yini nomsebenzi, kuyavunywa ukuthi kwakuncikene nomsebenzi wakhe?
Ukuthi umuntu ulimale ngesikhathi somsebenzi kuncika ekutheni ngabe lokho kulimala kudalwe umsebenzi wakhe yini. Umsebenzi kaNks uChurchill wawungahlangene nezindaba zezisebenzi noma ungathinti izinto eziyimbangela yeziteleka.
Ezimweni ezejwayelekile ukushaywa, ngisho ngabe kwenziwa umuntu enisebenza naye, akuhlangene nengozi eyenzeka umuntu enza umsebenzi awuqashelwe endaweni yokusebenzela.
Kulokhu-ke, isigameko sasingahlobene nezinto ezaba yimbangela yombhkisho kodwa sasuswa umbikishi owayecasulwe ukuthukwa uNks uChurchill ngesikhathi ethola ukuthi uvalelwe ngaphandle kwehhovisi lakhe. Ukwenza kwakhe kwaholela esigamekweni lapho ashaywa waphinde wehliswa isithunzi.
INkantolo Yokwedluliswa Kwamacala yanquma ukuthi ukulinyazwa kukaNks uChurchill akwenzekanga ngenxa yomsebenzi wakhe.
Le Nkantolo yabe isivumela isicelo sikaNks uChurchill sokuphonsela inselelo isinqumo seNkantolo Enkulu yaseMpumalanga yayalela ukuthi uNdunankulu unesibopho sokunxephezela ummangali ngokulimala kwakhe.
nguSabelo Mbatha Mar 12, 2021